Xaaladda Caafimaad ee Madaxweyne C/Kariim Xuseen Guuleed oo lagu – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
4th August 2016 A warsame Af Soomaali 0
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska ee Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan ayaa cadeeyay in xaaladda caafimaad ee Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug C/kariin Xuseen Guuled ay aad u wanaagsan tahay ka dib qalliin lagu guuleystay oo looga sameeyay dhinaca wadnaha.
Wasiirku waxa uu xaqiijiyay in madaxweynuhu uu xalay casho sharaf u sameeyay dhakhtarkiisa Ramakanta Panda oo ka mida 25-ka dhakhtar ee ugu muhimsan dalka India kaasoo horay ugu soo guuleystay qalliimo dhowr ah oo uu ku jiro Ra’isal Wasaaraha iminka talada ka haya wadanka India Narendra Modi & Madaxweyne C/kariin H. Guuled.
“Qalliinka waxa uu u dhacay sidii aan u qorsheynay, wax dhib ahna lagalama kulmin ayuu yiri, Dr. Ramakanta Panda oo u mahad celiyay madaxweynaha.
Madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa howlo caafimaad ugu safray dalkaasi India saddex usbuuc ka hor, waxaana la rajeynayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan dalka ugu soo laabto si uu u sii ambaqaado howlahii maamulka Galmudug.
Wasiirka Warfaafinta Hanuuninta Dhaqanka & Dalxiiska